XOG: Axmed Madoobe & Siciid Deni oo arrimo xasaasi ah ka wada hadlay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes wuxuu ogaaday in uu jiray wada hadal telfoon oo si gaar ah u dhexmaray Madaxweynayaasha dawlad gobaleedyada Jubbaland & Puntland oo labaduba aan ka qeybgalin kulankii shalay kusoo dhamaaday magaalada Muqdisho, waxayna kaga hadleen arrimaha siyaasadda ee hadda taagan.
Warsidaha ayaa helay xogta kulankan, waxaana ilo ku dhaw dhaw ay sheegeen in ay dhinacyadu isku raaceen in la adkeeyo Iskaashiga labada dhinac, sidaas oo kalena dadaal badan lagaliyo arrimaha siyaasadda ku wajahan.
Siciid Deni & Axmed Madoobe ayaa isku raacay in bishan October gudaheeda ay yeeshaan kulan siyaasadeed, gaar ah oo ay kaga tashanayaan arrimaha siyaasadda ee dalka, gaar ahaana jihada doorashada 2021-ka.
Axmed Madoobe wuxuu wajahayaa waqtigan culeys siyaasadeed oo dhinacyo badan uga imaanaya, waxaana mushkilada ugu weyn ay uga imaanaysaa Xukuumadda Faderaalka oo kusoo rogtay xayiraad dhinacyo badan leh.
Ka sokow is araga Masuuliyiintan ayaa wararku sheegayaan in uu ka dhici doono magaalada Kismaayo, iyadoo lafilayo in Madaxweynaha Puntland uu socdaal kutagi doono, inkastoo ay warar kala duwan kasoo baxayaan xagga ay wafdigiisu mari doonaan.
Puntland & Jubbaland ayaa isbaheysi adagi ka dhaxeeyaa, kaas oo ku saleysan dhinacyo badan, waxaana dhismihii Jubbaland horey qeyb weyn uga qaatay Cabdiraxmaan Faroole oo xiligaas ahaa Madaxweynihii Puntland, sidaas oo kale dagaalo ay la gashay ciidamo katirsanaa kuwa dawladda Fadetaalka, dhaawacyadeeda ayaa lagu duweynayay magaalada Gaalkacyo ee Puntland.